Farshaxanka gacanta midabka casaanka ah ee PTT iyo furayaasha xakameynta furaha ee SINIWO-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Farshaxanka gacanta midabka leh ee PTT iyo Fureyaasha furaha kontaroolada laga bilaabo SINIWO
Waqtiga: 2020-04-10 Hits: 52
Dhawaan, warshaddeennu waxay u sameysay qaar ka mid ah alaabada OEM ee loogu talagalay mashaariicda macmiilkayaga, macmiilkeennu wuxuu sheegay inay aad ugu qanacsan yihiin wax soo saarkeenna oo ay bixiyeen faallo aad u wanaagsan, labada dhinacba waxay rajeynayaan inay dhisaan xiriir iskaashi oo muddo dheer ah mustaqbalka!
Guud ahaan, taleefanka gacanta ee warshadaha PTT, nambarka moodada: A15, midab caadi ah waa madow, laakiin waxaan ka dhigi karnaa telefoonka midabbo kasta oo Paton ah. Macaamiisheena wuxuu isticmaalaa telefoonka gacanta casaanka oo leh qalab gargaar maqal oo firfircoon qaataha iyo electret mic, iyo waarta ABS caag caag ah u beddelato mashruuca taleefanka.
Alaabada ayaa si balaadhan loogu isticmaalay istcimaalka nidaamyada kontaroolada com intercom-ka iyo adeegyada kale ee laga galo albaabka.
Hore: Muxuu mustaqbalka 6G iyo wixii ka sareeya u ekaan doonaa nidaamyada isgaarsiinta illaa 5G?
Xiga: Ma u Baahan Tahay Xakamaynta Helitaanka & Koodhadhka Intercom?